တို့ဟူးနွေး (၃ယောက်စာ) | Wutyee Food House
« ကိုရီးယား ဖက်ထုပ်(မန်ထို)
ကိုရီးယား တော့ပူကီ »
August 16, 2011 by chowutyee တို့ဟူးနွေး ပြင်ဆင်ရာတွင် ပါဝင်သည့်ပစ္စည်းများ
Posted in -မြန်မာ ချက်ပြုတ်နည်းများ | 34 Comments	34 Responses
on August 16, 2011 at 10:56 am | Reply Cho Wut Hmone
look so delicious… i wanna eat too and i will try it very soon🙂
on August 26, 2011 at 9:28 am | Reply chowutyee
ကိုယ်လုပ်စားကြည့်… ငါကတော့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲကို တို့ဟူးနွေးထက် ပိုကြိုက်တယ်..
on August 16, 2011 at 11:55 am | Reply နွေးနေခြည်
on August 26, 2011 at 9:34 am | Reply chowutyee
Plz try it, friend!!😀
on August 16, 2011 at 1:02 pm | Reply ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)
ဒီမှာတော့ တိုဟူးသည်တွေ ပေါတာနဲ့ ၀ယ်ဘဲဝယ်စားဖြစ်တယ်
ခုတော့ လုပ်စားချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်း)
မချော ကိုယ်တိုင်လုပ်စားရတာ နည်းနည်းတော့ လက်ပေါက်ကပ်ပေမယ့်။ အိမ်မှာ လုပ်စားတော့ စိတ်ကြိုက်စားရတောပေါ့..😀
on August 16, 2011 at 1:41 pm | Reply magyi
on August 26, 2011 at 9:35 am | Reply chowutyee
on August 17, 2011 at 6:35 am | Reply hanlay
sar chin sayar lay bite taung sar lar p myanmar eal lae kyite par tal buy chinese food nae tchar asar tway ko po kyite tal adar tway ko po p lote pay naw sis ka naytine win kyi tal ama bar cook p tin htar lae loae
on August 26, 2011 at 9:36 am | Reply chowutyee
အားပေးလို့ ကျေးဇူးပါ ညီမ…😛
on August 19, 2011 at 9:56 am | Reply Khon
This site is very useful for me…I’m not good in cooking:)
on August 26, 2011 at 9:37 am | Reply chowutyee
on September 3, 2011 at 8:02 am | Reply htathtattun
တို့ဟူးနွေးက အိမ်မှာ လုပ်စားရတာ လုပ်ရတာ နည်းနည်း လက်ပေါက်ကတ်ပေမယ့် စားလို့ ပိုကောင်းတယ်..😀
on September 5, 2011 at 9:08 pm | Reply TunTun Kyaw
on September 7, 2011 at 4:12 am | Reply အန်တီတင့်
အန်တီက ငယ်စဉ်ဘဝမှာ ရှမ်းပြည်မှာပဲ ကြီးပြင်းလာတော့ ရှမ်းစာအားလုံး ကြိုက်တယ်။ တို့ဟူးနွေးကတော့ အနှစ်သက်ဆုံးပဲ ဝတ်ရည်ရေ။ ချက်နည်းလေးအတွက် ကျေးဇူးနော်။
on November 2, 2011 at 4:56 am | Reply မိုးမိုး
on November 4, 2011 at 8:20 am | Reply Thinzar
တို့ဟူးနွေးကျိုနည်း နောက်တနီးရှိပါတယ်၊ ကုလားပဲအစိမ်းမှုန့်ကို တစ်ညရေစိမ်ထားပါမယ်၊ မနက်ရောက်ရင် ရေမျက်နှာပြင်မှာ အမြှုပ်လေးတွေတက်နေပါလိမ့်မယ်၊ (အဲလိုအမြှုပ်လေးတွေ တက်နေမှ ရှမ်းဆိုင်က တို့ဟူးလိုမျိုး တို့ဟူးသားကြည်ကြည်လေးရမှာပါ၊) ရေစိမ်ထားတဲ့ အနယ်ထိုင်နေတဲ့ ကုလားပဲအစိမ်းမှုန့်တွေ မပါစေအောင် တစ်ညစိမ်ထားတဲ့ရေကို မနက်ကျရင် သွန်ပြစ်ပါ၊ အိုးတစ်ခုထဲမှာ ရေကို ဆူလာအောင် ကျိုပါ၊ ရေဆူလာရင် အနယ်ထိုင်ထားတဲ့ ကုလားပဲအစိမ်းမှုန့်အနှစ်ကို ရေဆူဆူထဲ ဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်းထည့်ပြီး အဆက်မပျက် မွှေပေးပါ၊ ပြစ်လာရင် တို့ဟူးနွေး ရပါပြီ၊ ကျိုတဲ့ရေ အချိန်အဆပေါ်မူတည်ပြီး တို့ဟူးအပျော့အမာ ကွာပါလိမ့်မယ်
on November 8, 2011 at 12:58 pm | Reply chowutyee
ခုလို ဖြေကြားပေးလို့ ကျေးဇူးပါနော်။ ၀တ်ရည်လည်း ဒီကျိုနည်းလေးကို မှတ်ထားလိုက်မယ်..🙂
on November 24, 2011 at 11:38 pm | Reply maung myintswe
thwar yee kya lite tar photo kyee p akone sarr thwar tal naw.
on November 25, 2011 at 10:27 am | Reply chowutyee
Sar Twar par:D
on December 3, 2011 at 7:20 pm | Reply sandar
on December 6, 2011 at 8:12 pm | Reply Tgyi
Would it be possible to translate the recipe and instructions into English?
I have planning to write Myanmar, English recipes. But I don’t have free to time to write English. But future I will try to do..😀
on February 5, 2012 at 7:57 am | Reply July...
wutyee…gram flour …nae lote tar lar?…(the same , right ?)
a yan sarr chin nay tar …thanks alot ..naw…
on February 5, 2012 at 4:32 pm | Reply chowutyee
gram flour nae တူတူပဲ၊ Plz try it sis.. Thanks also..😀
on February 20, 2012 at 6:49 am | Reply Min Thar Gyi
on February 21, 2012 at 9:35 am | Reply chowutyee
on March 27, 2012 at 11:56 am | Reply shin.saw.pu
on March 28, 2012 at 3:45 pm | Reply chowutyee
Thanks also sis yay!!!🙂
on April 30, 2012 at 8:36 am | Reply ko thiha
အမရေ ဆိုင်မှာရောင်းဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ထားရင်ကောင်းမလဲ။ ကျိုပီးသားဆိုမာသွားလိမ့်မယ်။
တချို့က ကျိုပြီသား တို့ဟူးကို ပြန်ချေပြီ ပြန်ကျိုတယ်။ အဲဒီလို လုပ်ရင် ဆိုင်အတွက် ပိုလွယ်လိမ့်မယ်…🙂
on May 14, 2012 at 1:59 pm | Reply About: Cho Wut Yee
[…] August 16, 2011 တို့ဟူးနွေး (၃ယောက်စာ) […]
on December 9, 2013 at 7:20 am | Reply Ei Thiri Kyaw